IPokethi yeSandbox: Musa ukusidibanisa nayo yonke iThailand
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba Eziphambili zaseThailand » IPokethi yeSandbox: Musa ukusidibanisa nayo yonke iThailand
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Ukwakha kwakhona • Iindaba Eziphambili zaseThailand • Tourism
U-KP Ho uthetha kwiNtlanganiso yeSandbox ye-Phuket ebibanjelwe eLaguna Phuket
Ethetha kwi-Phuket Sandbox Summit ebibanjelwe eLaguna Phuket, uSihlalo oLawulayo we-Banyan Tree Group, u-KP Ho, ubize abenzi bomgaqo-nkqubo eYurophu nakwihlabathi liphela ukuba baxhase iPhuket njengendawo eyahlukileyo "eluhlaza".
Iinkokheli zezoKhenketho kwiNgqungquthela yasePhuket yeSandbox zibongoza oorhulumente baseYurophu ukuba babone ubume bePhuket njengendawo ekhuselekileyo yabahambi bamanye amazwe.
"Uluhlu oluLuhlaza" indawo ekuya kuyo iSandbox yeyona nto iya kuqhuba ukubuyiswa kwezokhenketho kwihlabathi liphela kusho uMsunguli weQela loMthi waseBanyan uKP Ho.
Logama nje iSandbox icwangciswe kakuhle, njengoko kunjalo ePhuket, kufanele ukuba yahlulwe kwilizwe liphela.
Njengokuba iBangkok isilwa namanani anyukayo okosuleleka yi-COVID-19, uKP Ho, uxelele abathunywa baseYurophu, iinqwelomoya, amagosa aphezulu, kunye neenkokheli zeshishini, ukuba ukuze iPhuket Sandbox iphumelele, kunyanzelekile ukuba iPhuket inikwe "indawo eluhlaza".
IPhuket inamandla okukhokelela ekubuyiseleni ukhenketho kwihlabathi liphela, njengembali Iphulo lePhuket Sandbox ubeka umgangatho wezinye iindawo ekumele zilandelwe, utshilo. Kodwa, ukuze baphumelele, oorhulumente kufuneka bayamkele njengendawo ekhuselekileyo yokuzimela, endaweni yokudibanisa imeko yokuhamba nayo yonke iThailand.
Igunya lezoKhenketho laseThailand lingena ngaphakathi
Indawo kaKP Ho ixhaswe yi Igunya lezoKhenketho laseThailand (TAT) kwiNgqungquthela yeSandbox yePhuket. Usekela-Rhuluneli Wezentengiso Zamazwe Ngamazwe iYurophu, iAfrika, uMbindi Mpuma kunye nabantu baseMelika, uSiripakorn Cheawsamoot, uthe: “Sizama ukucebisa iPhuket kurhulumente wase-UK ukuba abekho kuluhlu oluluhlaza lweendawo zokufikela, nangona iThailand ikuluhlu lwe-amber. Sinethemba malunga nePhuket Sandbox. IPhuket ikhuselekile kwaye asinakuze sengozini nakubani na ukhuseleko. ”
Uqinisekisile ukuba phantse kwaba namagumbi angama-300,000 abhukishwe de kube sekupheleni kuka-Agasti kwiihotele ze-SHA Plus, abaphantse baba li-13,000 kunye neenqwelomoya eziyi-124 emva kweentsuku ezingama-28, zininzi ezinye ezicwangcisiweyo. Iimarike eziphezulu yi-US, i-UK, i-Israel, iJamani, i-France, i-UAE, kunye ne-Switzerland ngobude obuqhelekileyo bokuhlala iintsuku ezili-11.
Njengokuxhalaba kukhula ngaphesheya kwezona ndawo ziphambili zoMzantsi-mpuma weAsia zisokola ngamanani osulelo, imodeli yePhuket Sandbox ikhawuleza ibe ngumgcini wethemba kumzi-mveliso wokhenketho.